Dadaalo waxbarsho oo wax looga qabanayo gudniinka dumarka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dadaalo waxbarsho oo wax looga qabanayo gudniinka dumarka
La daabacay måndag 10 november 2014 kl 13.22
Maamulka gobolka Västra Götaland ayaa hirgeliyey waxbarsho la xiriirta gudniinka gabdhaha iyo dumarka, iyada oo ujeedaduna tahay sidii qaab wanaagsan loola dhaqmi lahaa gabdhaha iyo dumarka loo geystey gudniin ama qatar ugu jira in loo geysto gudnin.
Waxbrashadan ayaa la siinayaan shaqaalaha ka howlgala xaruumaha caafimaadka, iskuulada iyo garsoorka arrimahan qaabilsan.
– Aqoonta arrintan loo leeyahay waddanka oo dhan way kalo gedisan tahay. Haddi guud ahaan dalka oo dhan la fiiriyo waxaa jira degmooyin arrimahan wax weyn ka qabtay laakiin sida ay wax uga qabtaan iyo aqoonta ay u leeyahiin wey kalo gedisan tahay, ayey tiri Evalina Skog oo ah masuulka waxbarashadan u qaabilsan maamulka gobolka Västra Götland.
Gu’ga soo socda ayaa la filayaa in maamulka gobolka Västra Götland soo saaro dhabo mar ku sabsan sida arrimahan wax looga qaban karo. Maamulka gobolkan ayaa waxa arrintaan u xilsaaray dowladda dalka, howlsha loo xirsaareyna waxaa ka mid ah la hirgeliyo oo la dhiso koox ku xeer dheer oo awood xirfadeed u leh arrimaha la xiriira rabshadaha ku dhisan sharaf dhowrka iyo cadaadinta.